Wararkii ugu dambeeyey ee xanta suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda. - BBC News Somali
Wararkii ugu dambeeyey ee xanta suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda.
Arsenal oo isku diyaarnaysa jabinta rikoorka iibsiga ciyaartoyda.
Kooxda Arsenal ayaa sida wargeyska Mirror uu sheegayo waxay isku diyaarinaysaa inay jabiso rikoorka kala iibsiga ciyaartooyda ee adduunka, iyadoo ku doonaysa 164 milyan oo doolar laacibka 18 sano jirka ah ee Faransiiska u dhashay ee kooxda Monaco Kylian Mbappe, kaasi oo ay doonayaan kooxaha Yurub ugu tunka wayn oo ay ka mid tahay Real Madrid.
Tababaraha kooxda Bayern Munich Carlo Ancelotti ayaa u muuqanaya in uu albaabka u furayo in kooxdiisu ay u kacdo xagaaggan la soo wareegidda ciyaaryahan Alexis Sanchez-ka kooxda Arsenal ee fallaagada ka noqday in uu heshiis cusub kooxda u saxiixo.
Carlo Ancelotti oo muujiyey damaca uga jira Sanchez.
Carlo Ancelotti ayaa mar uu ka hadlayey Sanchez wuxuu ku tilmaamaay "ciyaaryahan wayn", sida ay qortay jariiradda London Evening Standard.
Geesta kale sida uu wargeyska Mail on Sunday wuxuu qoray in kooxda Manchester City ay sidoo kale doonayso inay la soo wareegto 28 jirka reer Chili, laakiin Arsenal waxay uma ogolaan doonto Sanchez in uu u wareego koox ka tirsan Premier League-ga oo ay iska soo horjeedaan.
Guardiola oo albaabka u tilmaamaya Joe Hart.
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa isku diyaarinaya in uu u ogolaado goolhayaha xulka qaranka England Joe Hart oo 30 sano jir ah in uu u wareego kooxdda xifaaltanka uu ka dhaxeeyo ee isku magaaladda ka dhisan yihiin ee Manchester United, sida wargeyska Sunday Express uu qoray.
Macalinka Manchester United Jose Mourinho ayaa wali jeedaalinaya in uu la soo wareego weeraryahanka kooxda Everton Romelu Lukaku ee 24 sano jirka ah, xitaa haddii kooxda Old Trafford ay soo iibsato xiddigga afka uga ciyaara kooxda Real Madrid Alvaro Morata, oo 24 sano jir, sidaa waxaa daabacay wargeyska The Sun.
Jurgen Klopp oo diidan iibinta Daniel Sturridge.
Maamulaha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa laga yaabaa in uu diido in Daniel Sturridge uu ka tago kooxda, sababtoo ah waxaa ugu kacaysa qiimo aad u fara badan ciddii lagu badali lahaa. Sunday Mirror ayaa sidaa sheegtay.Diego Costa oo laga yaabo in uu ka boorkiciyo Atletico Madrid.
Kubad dhaliyaha Chelsea Diego Costa ayaa kaabiga u saran in uu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Atletico Madrid, laakiin 28 jirkan uma ciyaari karo kooxdaas maaddaama uu saaran yahay ganaax in illaa iyo bisha Janaayo aanay cid iibsan Karin. Wargeyska AS ayaa sidaa wariyey. Alex Oxlade-Chamberlain oo ka gows-adeygaya saxiixa heshiis cusub.
Ciyaaryahanka Arsenal uga ciyaara khadka dhexe 23 sano jirka Alex Oxlade-Chamberlain ayaa sida Sunday Times sheegayso wuxuu ka biyo diidsan yahay in uu heshiis cusub u saxiixo kooxdiisa, isagoo diyaar u ah in uu dhamaysto heshiiska uu kooxda kula joogo ee xaggaaga dambe ku eg, si uu sanadka dambe meeshii uu doono u aado.